बीरगंजमा नेपाल बन्दको प्रभाव : १५ दिनदेखि बसपार्कमा रोकी राखिएको बसमाथि समेत बन्दकर्ताले गरे आगजनी !
ARCHIVE, COVER STORY, POLITICS, SPECIAL » बीरगंजमा नेपाल बन्दको प्रभाव : १५ दिनदेखि बसपार्कमा रोकी राखिएको बसमाथि समेत बन्दकर्ताले गरे आगजनी !
अर्थ सरोकार संबाददाता
वीरगंज- नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आव्हान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव बीरगंजमा पानी परेको छ । बीरगंजमा बन्दकर्ताहरुले बसपार्कमा १५ दिनदेखि रोकीराखेको वीरगंज ठोरी चल्ने ग १ ख ३१४७ नम्बरको यात्रुवाहक वसमा आइतबार विहान आगजनी गरेका हुन् । आगजनीले बस् पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।
मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ओली सरकारले राष्ट्रघात र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि धोका भएको भन्दै त्यसको विरोधमा नेपाल बन्दको आह्वान गरिएको थियो । बन्दका दिन ठाउँ- ठाउँमा बम फोस्फट भएका छन् ठाउँ- ठाउँमा गाडी जलाइएका छन् ।
किन सार्वजनिक विदाकै दिन बन्दको आह्वान गर्छन् विप्लव ? निरन्तरको संयोग कि असफलताको त्रसित मानसिकता ?
बन्दको दिन धर्म परिवर्तनविरुद्ध उत्रिए नेकपाका कार्यकर्ता : सुदुरपश्चिमको ३ वटा चर्चमा शक्तिशाली बम फिस्फोट !
धादिङमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाली जलाइयो, प्रहरीले आगो निभाउन नसकेपछि काठमाडौँबाट पुग्यो दमकल !
चितवनमा नेपाल बन्दको प्रभाव : मोटरसाइकलमा आएका नेकपा कार्यकर्ताले भाटभटेनीमा बम पड्काए ! भयो यस्तो क्षति
आज नेपाल बन्द: विप्लवका कार्यकर्ताले काठमाडौँमा २ वटा ट्याक्सी जलाए, पेप्सीकोलामा बसमाथि आगजनी !
मोदीको विरोधले उग्र रुप लिने संकेत, आइतबारको बन्दको पूर्वसन्ध्यामा सिंहदरबार अगाडी नै बम भेटियो !
बन्दै बन्दैन देश यो 'बन्द'ले ! त्यसैले 'बन्द' गरौँ यो 'बन्द' !
प्रकाशित : Sunday, May 13, 2018
Tags : ARCHIVE, COVER STORY, POLITICS, SPECIAL